လက်ကား Front Idler Dulldozer ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Pingtai
1.ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်၏ဘီးကိုယ်ထည်အား HRC55-58 ၏မာကျောမှုဖြင့် 35SiMn ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အနက်ရှိုင်းသည် 6-8 မီလီမီတာသို့ရောက်ရှိကာ ဝတ်ဆင်မှုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။42Crmo သံမဏိအတွက် Central shaft ပစ္စည်းသည် ကျိုးလွယ်သည်မဟုတ်။ဒါမှ ထုတ်ကုန်ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ပိုရှည်စေမှာပါ။
စျေးကွက်ရှိထုတ်ကုန်အများအပြားတွင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများမှာ 50Mn နှင့် 45# သံမဏိများဖြစ်ပြီး ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီဘဲ ကျိုးလွယ်သည်။
2.ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာသည် အတုလုပ်ခြင်းနှင့် တိကျစွာပုံသွင်းခြင်း၊ CNC ဒေါင်လိုက်စက်ထုတ်လုပ်မှုကို အသုံးပြုသည်။
တိကျသေချာစွာ ပုံဖော်ခြင်းသည် ဘီးကိုယ်ထည်ကို သိပ်သည်းဆမြင့်မားစေပြီး ချွေးပေါက်များမရှိသည့်အပြင် ဓာတ်ငွေ့များ ယိုစိမ့်လွယ်သည်။
CNC ဒေါင်လိုက်စက်ကို ထုတ်ကုန်အရွယ်အစားကို ပိုမိုတိကျစွာ ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ချောချောမွေ့မွေ့ မြင့်မားစေရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေက ပိုကောင်းတယ်၊ လည်ပတ်မှုကလည်း လုံခြုံတယ်၊ ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်တယ်၊
3. ထုတ်ကုန်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပုံဆွဲမှုသည် 1:1 မူရင်းအရွယ်အစားဖြစ်သည်။ဝယ်ယူသူ၏ အရွယ်အစားသွေဖည်မှုကို ထည့်သွင်း၍မရသည့်အခါ ၎င်းသည် ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ။
4.ကျွန်ုပ်တို့၌ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် QC အဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီး ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်း၊ တစ်ပိုင်းကုန်ချောနှင့် ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာများထုတ်ခြင်းတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။
ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် ID နံပါတ်ရှိသည်။ဖောက်သည်များက ထုတ်ကုန်ပြဿနာများကို တုံ့ပြန်သည့်အခါ၊ ထုတ်ကုန်၏ ID နံပါတ်အရ သက်ဆိုင်ရာ QC စမ်းသပ်ကြေငြာချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ပြဿနာကို ရှာဖွေပြီး ဖြေရှင်းချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
နှင့် idler ၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ခြေရာခံလင့်ခ်များကို ချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်စေရန်နှင့် dislocation ကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ Idlers များသည်လည်း အလေးချိန်အချို့ကိုသယ်ဆောင်ကာ မြေပြင်ဖိအားကိုလျော့ကျစေမည့် ၎င်းတို့၏ခြေရာခံလင့်ခ်များကိုတိုးမြင့်စေသည်။ track link ကိုပံ့ပိုးပေးပြီး လမ်းညွှန်ပေးသည့် အလယ်ဗဟိုတွင် လက်တံတစ်ခုလည်းပါရှိသည်။ နှစ်ဘက်။idler နှင့် track roller အကြားအကွာအဝေး သေးငယ်လေ၊ orientation ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
ဖော်ပြချက်- CAT D11 ရှေ့တွင် IDLER DULLDOZER သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
Supply နိုင်ခြင်း: 1000 PCS/လ
မာကျော- HRC55-58၊ အနက် 6-8mm
ယခင်- Carrier Roller တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း
နောက်တစ်ခု: Sprocket အပိုင်းကို အတုလုပ်ထားသည်။
CaterPILLAR BULLDOZER D10 ခြေရာခံ roller တပ်ဆင်ခြင်း...
Caterpillar Dozer အစိတ်အပိုင်းများ D7G D7F Front Idler 1S8...
Bearing Roller ကို ခြေရာခံပါ။, Mtg Wear Parts, Excavator Bucket Cutting Edge, Excavator Bucket Wear အစိတ်အပိုင်းများ, High Strength Bolt, Excavator Undercarriage Wear,